INetflix ihlela ukwethula uchungechunge lwangempela olungu-700 ngo-2018 | Izindaba zamagajethi
URuben gallardo | | Ama-movie nochungechunge
Izinto zibonakala zihamba kahle ngaphakathi kweNetflix. Ngempela ividiyo edume kakhulu ekufuneni insizakalo nxazonke. Manje, akafuni ukwehlisa unogada wakhe futhi kulo nyaka u-2018 uzophonsa indlu ngefasitela: ukusetshenziswa okuphelele kwe- $ 8.000 billion kokuqukethwe okuphathelene. Kodwa-ke, hhayi kuphela lesi sibalo sokuchitha esithukile, kepha futhi nenhloso yenkampani maqondana nochungechunge lwayo lwangempela.
Kuphakathi kokuthi uyashesha, i-Netflix, noma usuvele wephuzile. Futhi sikusho lokhu ngoba iCFO yenkampani uqobo kwembuliwe ukuthi inhloso yesevisi yevidiyo qalisa emhlabeni wonke kulo nyaka i-2018 izinhlelo noma uchungechunge lwama-70 lwangempela. Lokho wukuthi, kufanele bakhiphe uchungechunge lwangempela lwesi-2 - cishe - ngosuku. Futhi kuze kube manje kulo nyaka le njongo kubukeka sengathi ayifezeki.
Ngakolunye uhlangothi, babuye bambuza ngamafilimu okuqala. Umqondisi akazange athuthumele lapho ephendula. Futhi inkampani ibala lokho izoba nezinhlu zalo nyaka amafilimu angama-2018 angama-80 avela efemini yawo. Ngokunjalo, lolu hlobo lokuqukethwe lwenza ipaki yomsebenzisi yeNetflix iqhubeke iba nkulu. Yini enye, ingabe uthola amanani ayo ayabiza ukujabulela ikhathalogu yayo yonke? Akubonakali kanjalo kithi.
Okwamanje, kufanele futhi sazi ukuthi abaphikisi abasha bayeza. Siyakwazi lokho I-Apple ibheja kakhulu kulo mkhakha; nsuku zonke sihlangana nokusayina okusha noma okuqukethwe okusha kwepulatifomu yakho yesikhathi esizayo. Ngaphezu kwalokho, omunye onamandla womkhakha we-audiovisual uzofika kungekudala. Sikhuluma ngeDisney kanye nesivumelwano efinyelele kuso neFOX. Ngaphezu kwalokho, akukho konke lapha futhi kungenxa yokuthi kwaDisney bakuqinisekisile lokho Imali oyikhokha nyangazonke ingabiza kakhulu kune-Netflix. Ngakho-ke, ukwesaba okukhulu kubaphathi bakamuva. Bangakwazi ukufinyelela ochungechungeni lokuqala lwama-700 kulo nyaka we-2018?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » INetflix ihlela ukukhipha uchungechunge lwangempela olungu-700 ngo-2018
I-LG G7 yethulwe ku-MWC, kepha ngasese